Ngaba unokuthanda kuphela i-platonic?
Abameli be sizukulwana esidala basoloko besitshela ukuba uthando ngexesha labo lalihluke ngokupheleleyo. Kakade, yonke into ingaba. Kwiindidi ezahlukeneyo, uthando luya kukhula kwaye lubonakalise ngeendlela ezahlukeneyo. Kodwa kusekuninzi kubantininakhulu noomkhulu-ntloko unokuva ukuba banokuphila uthando lwe-platonic iminyaka neminyaka. Yingakho ngamanye amaxesha siyazibuza ukuba uthando luya kuba njalo. Kanti ke, ukuba le mvakalelo ifaneleke njani? Uthando lukaPlato? Le mvakalelo ayihambisani nokukhangwa ngokwesini okanye phantsi kwayo. Olu luthando luhlala ixesha elingakanani? Mhlawumbi, abaninzi baya kuthetha ukuba iimvakalelo zangempela azikwazi ukuba yi-platonic kuphela. Kodwa, abanye bangaphendula ukuba uthando kufuneka lube yi-platonic, kuba kule fomu yinto ecocekileyo kwaye eqaqambileyo. Kodwa uthando, ngokwenene, luhluke kakhulu. Nangona kunjalo, unokuthanda kuphela kuphela i-platonic?
Ngoko, makhe sibone oko sikubonisa ngcamango yothando kuphela lwe-platonic. Kuphela ukuba uyayiqonda le nto, ungazama ukuphendula umbuzo: unokuthanda kuphela i-platonic? I-Platon yintando, nto leyo ebonisa ukuxhamla, ukuxhomekeke kwimiva, inkxaso kunye nokuqonda. Kodwa, kule ngxaki, phantsi kweli ngcaciso kuza nomvakalelo owenzela ngamnye ngamnye kubaluleke kunokuba uthando lubuhlobo. Emva koko, uya kuvuma, ubuhlobo obunothando olufanayo, kodwa ngaphandle kokwabelana ngesondo. Siphinde sifinyelele kumntu, simkhumbula, simfuna ukuba ahlale kufuphi naye kangangoko kunokwenzeka. Sifuna ukumkhukula kwaye singamvumeli ukuba ahambe ixesha elide. Kodwa le miqweno inomlingani ohlukileyo. Asikhange kumntu. Sifuna nje ukuba abe ngeenxa zonke kwaye akukho nto. Kwaye xa sithandana, ngaphandle kwemvakalelo yethu, izilwanyana zethu ziqala ukubonakalisa kunye nesifiso sesini esivusa. Ngoko ke, mhlawumbi, asikwazi ukusho ukuba kukho uthando kuphela lwe-platonic. Oko kunjalo, ekhona, kodwa sibiza ngokuba ngumhlobo.
Kuyinto enye into xa umntu enqamla ngamabomu iminqweno yakhe kwaye unyanzelekile uthando lwe-platonic. Kutheni abanye abantu bekwenza oku? Izizathu zinokuba zininzi: ubudala, ukukhuliswa, inkolo kunye nokunye okuninzi.
Kule nqaku, siza kuthetha ngendlela yokuziphatha ngayo amantombazana ukuba bafuna ukuba nobudlelwane be-platonic kunye nomfana kunye nendlela yokuphatha abafana abangafuni ngaphezu kwe-platonic uthando ngaphambi kokuba uvumele umtshato. Kwaye ekugqibeleni siya kuqonda: yintando yeplanonic, okanye ingeyonto?
Ngoko ke, ukuba udibana nomfana, kwaye unxininisa ngaphezu kokubanga ebhentshini, kufuneka usebenze njani kwimeko? Okokuqala, cinga ngobudlelwane obunzulu bunjani kunye nokuba ulungele ukuthatha isinyathelo esinjalo. Ewe, amantombazana amaninzi azama ukucinga ngale nto, echaza oku ngokuthi "wonke umntu wenza oko". Enyanisweni, i-reflex yomhlambi ayikho into ehloniphekileyo nefanelekileyo. Okokuqala, wena ngokwakho kufuneka uqonde oko ufuna kanye nendlela ofuna ukuyenza. Izigqibo zabahlobo bakho, abahlobo kunye nabantu abaselula akufanele baphumelele kwizigqibo zakho. Ngoko ke, ukuba uthe wagqiba ekubeni ulwalamano lwakho lufanele lube sisitonic, luzolile kwaye luchaze ngokucacileyo le nto kumfana. Ngokuqinisekileyo, kunokuba nzima ukuba amadoda azinqande, kodwa ukuba uyathanda, unako ukulinda.
Ukuba umfana uqhubeka efuna uqobo lwakhe kwaye usongela inxalenye, ngoko akufanele umele. Akukho mntu uyazihlonelayo uya kukhangela ibhinqa. Khumbula ukuba umntu onothando unokuhlala esenza izigqibo ezinzulu kwaye akhiye ukukhetha. Ngoko ke, kwimeko xa umfana ephikelela kakhulu kwaye akafuni ukuva nantoni na, isisombululo esona siphumelelo sihlukana. Ukuba uhamba naye ngezinye izihlandlo, kuya kuhlazisa, kwaye ulwalamano olunjalo, kwiimeko ezininzi, aluyi kuhlala ixesha elide. Ngoko ke, yiba nengqiqo. Ewe, iimeko zifani kakhulu, kodwa xa umntu ethanda ngokwenene, uya kuvuma ukunika imigaqo yakho. Ngokwemvelo, akusiyo wonke umntu onokukwazi ukunikela ngokukhawuleza ubudlelwane be-platonic, kodwa kulo mzekelo, xa bekhula beza kuba yi-full-fledged, bavele bavavanywa kwaye lona wesifazane akanalo ncamango: unesondo kuphela, ngokuba sele eqinisekile ukuba oku akukho konke kunjalo.
Enye into echaphazelekayo yamantombazana yimeko xa umntu omncinci ezama ukuxhamla ubudlelwane be-platonic. Kakade, ayithandwa kakhulu kunaphambili, kodwa inendawo yokuhlala. Kule meko, abafazi banokuqiniseka ukuba bathandwa ngokwenene, kwaye amadoda alawulwa yinto yokukhwabelana ngesondo. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, amantombazana asetyenziswa kwezinye ubudlelwane, kunzima ukwamkela oku kuziphatha komfana othile. Kule meko, umfana ufuna ukuthetha nokufumana izizathu zokuba uziphatha njani ngale ndlela.
Mhlawumbi wayenolwazi olubi ebusheni bakhe. Emva koko yonke into ingalungiswa, ukuba uyifake ngokuthe ngcipheko ukuba akukho nto embi eya kwenzeka, uyayithanda, yamukele njengoko kunjalo, awusayi kuphinda uyichukumise kwaye awuyi kuyenza. Ukuba le nto ikhutshelwe okanye inkolo, ngoko ke sele sele uhlangabezana nemigangatho enokuthi ishintshwe kakhulu. Ngoko ke, umele uwamkele kwaye wamkele isikhundla salo mfana. Ukuba uyamthanda ngokwenene, ngoko uyavuma ngokuvisisana naye kwaye ulinde ngokude nje. Ekugqibeleni, cinga ngento yokuba abantu abaninzi besizukulwana esidala bathatha ukuziphatha okunjengomthetho kwaye baphila ngokuthula kunye nayo. Yaye imitshato emininzi yayomelele kunamhlanje.
Ngokwemvelo, ibini ngalinye linamabali alo kwaye umntu akanako ukuthatha umntu njengomgangatho. Kodwa khumbula ukuba xa unokumthanda nje inkwenkwe ukusuka kwindlu elandelayo kwaye ungacingi nangakumbi kunokuhlala esihlalweni esiseduze. Ngoko uzama ukuthatha indawo yenkwenkwe yakho kwaye ujabulele uthando lwakho lwe-platonic, kuba naye unamathuba amaninzi.
Ukuba umntu ulwa nomfazi
Ndiyanqikaza ukudansa umyeni wam i-striptease, ndimele ndenze ntoni?
Impazamo yamabhinqa ebudlelwaneni nomyeni wayo
Indoda nomfazi: ubudlelwane besini
Oko kufuneka uyenze ukwenza umntu enze isipho
Ngaba kunokwenzeka ukuqwalasela umtshato womtshato ukuba uzele?
Izipho zomhlobo we-Valentine's Day
Iibhatateshi ekudleni komntwana
Shish kebab kwi-bacon
Ukupheka kwekhosi yesibini kweholide
Ukuqhaqhozeka okungapheli kubantwana, isifo sikaHirschsprung
Izipho zokuqala zomfazi ngoMatshi 8
Ukupheka okumnandi, okulula kwaye akubizi
Kunokuba uphathe umkhuhlane ngexesha lokukhulelwa
Hmayak Hakobyan, biography
Kuloo nto ungayenza imali kwintlekele
Umlinganiselo wamadoda kubafazi abazimeleyo
Ukuqhutyelwa kweyinyathelo ngeyunithi ye-pedicure ekhaya
I-Chocolate Fudge kunye ne-hazelnuts kunye nama-walnuts
Isimo sezulu eMoscow ngo-Oktobha 2016. Yintoni eya kuba seMoscow ekuqaleni nasekupheleni kukaOktobha-ukubikezelwa kwiziko le-Hydrometeorological Centre
Unyango kunye nokuphumla kwiLake Baikal
Ukutya kwe-Beet kulabo abafuna ukunciphisa umzimba
Iintlobo kunye ne-berry tart
Ukulungiswa ngokwenyama kunye nengqondo yokubeletha